Rajaonah Andrianjaka : “Hoesorin’ny vahoaka ny mpitondra manitsy lalàmpanorenana” | NewsMada
Rajaonah Andrianjaka : “Hoesorin’ny vahoaka ny mpitondra manitsy lalàmpanorenana”
“Mino aho fa tsy maintsy hoesorin’ny vahoaka eo izy, raha miroso amin’izay. Satria tsy eken’ny vahoaka izany.” Izay ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny Otrikafo, Rajaonah Andrianjaka, momba ny fikasan’ny fitondram-panjakana hanitsiana ny lalàmpanorenana ka iantsoany fifampidinihana.
Raha hanao ny fanitsiana lalàmpanorenana amin’izay hahametimety kokoa ny toerany amin’ny maha filoham-pirenena azy izy. Maka tahaka mpitondra fanjakana any Afrika izany. Amin’izay fotoana izay, hanaraka ireo mpitondra fanjakana eto Madagasikara efa nanao an’izay: ny filoha isany Tsiranana nalan’ny vahoaka, Ratsiraka, Ravalomanana.
“Tsy hitako izay tena ilàna ny fanitsiana ny lalàmpanorenana”, hoy izy. Mitady lalana sy fomba hafa indray ny fanjakana hampandehanana ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Ho avy ny vahiny sy ny “malety” amin’ireo olona antsoiny eo, hanome ny hevitra tadiavin’ny filoha.
Nanao “Tsia” ny Otrikafo tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka nandaniana io lalàmpanorenana io. Tsy manaiky an’io izany ry zareo. Tsy ankatoky ny fifidianana 2018 no hovaina io, fa aleo handeha amin’izao…
Mila manova lalana i Madagasikara
Ho avy ny fifidianana 2018, ny olana mahazo an’i Madagasikara: hanohy hatrany ny politika tsy mahomby izay efa natao ary miteraka izao fahantrana izao? Ny fiankinana amin’ny vola avy any ivelany hampandrosoana an’i Madagasikara ilay politika tsy mahomby.
Tsy mbola nampandroso firenena na iray aza teto ambonin’ny tany io vola avy any ivelany io. Mijanona ho mahantra izay rehetra nampian’ny mpamatsy vola mahazatra, fa mampandroso ny toekaren’ireo mpampisambo-bola.
Noho izany, tokony hiova lalana i Madagasikara amin’ny 2018, tsy handeha intsony amin’izao lalana mitondra amin’ny fampahantrana izao. Maniry ny mba hisian’ny soso-kevitra hampandroso lalam-baovao amin’izay ny Otrikafo, fa tsy hijanona amin’ny lalana mahazatra tsy mahomby.